Ampianarin’ny Afrikanina Mikasika Ny Fitantanana Mahomby ny Filoha Amerikana Taorian’ny Fanambarany ‘Shithole’ Niteraka Hatezerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2018 15:38 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, Português, Français, English
Ireo mpitarika Afrikana tamin'ny Fivoriana Ambony faha-4 momba ny ny Fampihenana ny Loza Voajanahary. Sary avy amin'ny Paikady Iraisam-pirenen'ny Firenena Mikambana ho Fampihenana ny Loza (UNISDR).
Ny Alakamisy 11 Janoary, nanondro an'i Haiti, El Salvador, sy ny firenena Afrikana sasany ho “vongany” nandritra ny fivoriana momba ny fifindramonina tao amin'ny Birao Borilava any Washington D.C. (Etazonia) ny filoha Amerikana (Etazonia) Donald Trump. Araka ny voalazan'ireo mpanao lalàna tao amin'ny fivoriana, hoy i Trump:
Nahoana no tonga eto amintsika ireto olona avy amin'ny firenena vongany ireto?
Niteraka fanamelohana iraisam-pirenena avy hatrany ny fanehoan-kevitra tsy mendrika avy amin'ny filoham-pirenena Amerikana, anisan'izany ireo fanehoan-kevitra mananihany mahavariana avy amin'ireo mpiserasera Afrikanina izay nampiasa ny fanamarihan'i Trump “vongany” ho fanararaotana mba haneho ny hatezeran'izy ireo amin'ny tsy fisian'ny fitantanana tsara ao amin'ny ankamaroan'ny firenen'izy ireo Afrikanina tsirairay avy.
Rupert Colville, mpitondratenin'ny Vaomiera Ambony ny Firenena Mikambana Misahana ny Zon'olombelona, ​​ namaritra ny fanambarana ho “mpanavakavaka:”
Fanehoan-kevitra manafintohina sy mahamenatra avy amin'ny filohan'i Etazonia ireo. Tsy misy teny hafa azo ampiasaina afa-tsy ny hoe ‘mpanavakava-bolonkoditra’ … Tsy azonao atao ny manary firenena sy kontinanta manontolo satria ho “vongany”, ary tsy arahabaina tongasoa ny mponina manontolo, izay tsy fotsy hoditra… Manokatra varavarana amin'ny lafiny ratsy indrindra amin'ny maha-olombelona izany, manaiky sy mandrisika ny fanavakavaham-bolonkoditra sy fankahalana vahiny izay mety hanakorontana sy hanimba ny fiainan'ny olona maro izany.
Nampanantsoin'ny fitondrana Botswaney ny masoivoho Amerikana ao Botswana mba hanehoany ny tsy fahafaliany tamin'ny fanambaran'ny filohan'i Etazonia, Donald Trump:”
FILAZANA AN-GAZETY: Manameloka ny fanamarihana nataon'ny filoha Trump i Botswana
Niezaka nampihena ny fiantraikan'ny fanehoan-keviny i Trump tamin'ny alalan'ny fandavana izany, ka nilaza fa “nataon'ny Demaokraty izany”.
Tsy nilaza zavatra ratsy velively momba ny Haitiana ankoatra an'i Haiti, izay mazava ho azy, fa firenena mahantra sy sahiran-tsaina. Tsy niteny velively hoe “esory izy ireo.” Nataon'ny “Dems”. Manana fifandraisana mahafinaritra amin'ny Haitiana aho. Angamba tokony hanoratra fihaonana ho avy – saingy indrisy, tsy misy fitokisana!
Namaly avy hatrany ny fanehoan-kevitr'i Trump ny mpiserasera Afrikanina. Na dia tsy manamarina izany, nilaza ny sasany fa fiampangana ny governemanta ao amin'ny firenena Afrikanina marobe ny fanambaran'i Trump:
James Proper, mpikambana Ogandey ato amin'ny Global Voices nilaza hoe:
Nahoana ianao no sahirana tamin'ny @realDonaldTrump miantso ny firenentsika fa #Shithole?
Voalohany indrindra, tsy nahomby ho lasa mahaleotena tanteraka isika. Miantehitra amin'izy ireo amin'ny vola isika, ka tsy manaja antsika. Mila manomboka mieritreritra tsy mila miantehitra isika. Aleo mijaly amin'ny kely ananantsika ary manorina mba ho lehibe.
Naneho fahatsapana tahaka izany ihany koa i Ugo Agbaji, Nizeriana:
Firenena VONGANY i Nizeria noho ireo mpitondrany. Tsy maintsy miombon-kevitra amin'i Trump izay halako indrindra aho. Ry namana Trump, azafady, ampahatsiahivo an'i Nizeria fa firenena lava-tay izy ka mila manangona ny tain'izy ireo ny mpitondra
Mpiserasera Kenyana, Daniel Makaya nanesoeso momba ny kolikoly sy ireo mpitarika tsy mba mihetsiketsika ao Afrika:
Firenena vongany be i Afrika, indrindra fa ny faritra atsimon'i Sahara tarihin'ireo mpihatsaravelatsihy toa an'i Afrika Atsimo, Nizeria ary Kenya. Mivelona amin'ny vahoakany ny governemanta ary miditra any am-paosin'ireo mpanao politika voakasika ny 75% amin'ny fidiram-bolam-panjakana. Tsy afaka ny hifaninana i Afrika miaraka amin'ny fitantanany ankehitriny.
Nivatambatam-piteny ilay Nizeriana, Kelvin Odanz:
Mahafantatra ireo Nizeriana monina ao Nizeria fa vongany i Nizeria. Milahatra ao amin'ny ambasady izy ireo isaky ny herinandro mba hangataka hitsoaka.
Ireo Nizeriana izay nahavita nandositra sy ireo fiara mitandahatra Pan Afrikanista (monina lavitry ny lava-tay) no antsoin'i Donald Trump tezitra hoe Nizeria vongany.
Ny sioka nalefan'ny namana Nizeriana Onye Nkuzi indray dia manondro ny tsy fisian'ny rariny ho an'ireo olona novonoin'ireo mpiandry ondry tamin'ny andron'ny Taombaovao tao amin'ny Fanjakana Benue any Nizeria:
Miala tsiny, vao avy nandevina tovolahy, vehivavy sy ankizy tsy manan-tsiny miisa 73 tany Fanjakana Benue, Nizeria izahay.
Noho izany, manana olana lehibe kokoa hatrehina izahay fa tsy ny fanamarihana maneson'i Trump.
Ary eny, lava-tay i Nizeria. Mikasika an'i Afrika ambiny, tsy fantatro – tsy fantatro tsara ka tsy haneho hevitra aho.
Steve Biko kosa nanome tsiny ny politika ara-pokon'i Afrika:
Araka ny filazan'i Trump, firenena vongany miaraka amin'ny fampitaovana mahantra, ny hanoanana sy fitarihana ratsy i Afrika.
Izany no azontsika rehefa mifidy mpitarika mifototra amin'ny foko isika Afrikanina. Olona mahatsikaiky (clown) no hiafarantsika izay tsy manana politika momba ny fomba ahafahan'i Afrika ho mahaleotena araka ny fombany.
Nanome toro-hevitra ho an'ny Afrikana ilay Ghaneana Herbsman mba hanavotra ny hatezeran'izy ireo ary hiasa amin'ny “fitodihana amin'ny toe-draharaha manodidina antsika”:
Lava-tay i Afrika. Aza tezitra. Atambaro izany hery izany ho amin'ny fitiavan-tanindrazana ary mijery ny zava-misy manodidina.
Na izany aza, tezitra tamin'ny fanehoan-kevitr'i Trump ny Afrikanina sasany. Niteny am-pahasahiana Ramatoa Nawande hoe “filoha vongany i Trump”:
ENY manana ny olany i Afrika sy ny fireneny .. tsy iadian-kevitra izany .. saingy tafahoatra ny fanevatevana sy ny tsy fanajana tanteraka ataon'ny firenena izay nanendaka ny loharanon-karenany nandritra ny taona maro. FILOHA VONGANY I TRUMP.
Nyaguthii wa Muriuki maneho hevitra momba ny tsy firaharahian'ny Amerikana an'i Afrika:
Fanehoana tanteraka ny sain'ny Amerikana ny filohan'i Etazonia. Taona 2018 izao ary mbola mampiasa sarin'ankizy matin'ny hanoanana nalaina tamin'ny taona maro lasa izy ireo. 0.00000000000000000000001% n'ny mponina Afrikanina ary mampianatra an'i Amerika hoe tahaka ny ahoana i Afrika * vongany angamba hoy aho
Didi Angela nampahatsiahy an'izao tontolo izao indray fa kaontinanta i Afrika, fa tsy firenena:
Antsoin'ity filoha ity hoe firenena vongany i Afrika? Misy afaka milaza aminy ve fa kaontinanta i Afrika, ary iray amin'ireo vondrona avara-pianarana indrindra ao amin'ity firenena ity ihany koa ireo mpifindra monina Afrikanina, mpanavakava-bolonkoditra sy tsy mahay ity filoha ity, mahasosotra.
Gege, Nizeriana monina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, nampianatra ny filoha Amerikana mba hanatsara ny fahamendrehan'ny asany:
Fahamendrehana, fanetre-tena & fangorahana. Izany no atao hoe mpitarika lehibe.
Marina fa helo ho an'ny maro i Nizeria. Ratsy toetra tsy mampino ihany koa i Trump manivaiva ny fari-piainan'ny mahantra ao Afrika.
Manevateva ny fiadidian'ny Amerikana amin'ny fitondrantenany hafahafa ity lehilahy ity.